Kutubta uu Qoray Guddoomiyaha Midowga Culumada Islaamka oo laga mamnuucay Sacuudiga – Balcad.com Teyteyleey
Dowlada Sacuudiga ayaa wali wada soo saarista amarada dalkeeda looga mamnuucayo wax walbo ay ku lug leedahay dowlada Qadar, waxaana Sacuudiga markan ay soo saareen amaro dalkeeda looga mamnuucao Kutubo badan uu Qoray Sheekh Yusuf al-Qardaawi.
Amar shalay kasoo baxay Wasaaradda waxbarashada Sucuudiga ayaa looga mamnuucay Kutubta diiniga ah uu qoray Sheekh Yusuf al-Qardaawi oo ah guddoomiyaha midowga culumada Islaamka, waxaana Wadaadkan oo u dhashay dalka Masar fadhigiisu yahay dalka Qadar.
Wasaarada Waxbarashada Sacuudiga ayaa sheegtay in laga saarayo Maktabadaha iyo Jaamacadaha dalkaasi Kutubta uu qoray Sheekh Yusuf al-Qardaawi , ay ku eedeeyeen in uu xariir la leeahay dowlada Qadar iyo sidoo kale Ururada Argagaxisada ah.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Sucuudiga Axmed binu Maxamed Al-Cisa ayaa amray in goobaha Waxbarashada iyo Maktabaha Sacuudiga laga saaro dhamaan Kutubta uu qoray Caalimka weyn ee Sheekh Yusuf al-Qardaawi .
Waxa uu sheegay Wasiirka Waxbarashada Sacuudiga Kutubta uu qoray Sheekh Qardaawi in ay khatar ku yihiin fikirka ardayda jaamacadaha iyo iskuulaadka, waxa uuna tilmaamay Wasiirka in Dhamaan Kutubta Sheekhan laga saarayo Maktabahada dibna aan loogu soo celineyn.
Sacuudiga iyo Wadamada Xulufada la ah ee Xayiraada kusoo rogay dalka Ciraaq ayaa dhawana soo saaray liiska 59-qof oo Wadamo kala duwan u dhashay uuna ku jiro Sheekh Yuusuf Qardaawi, kuwaa ay ka mamnuceyn wadamadooda kuna eedeeyeen in ay xariir la leeyihiin Ururada Argagaxisada ah.
The post Kutubta uu Qoray Guddoomiyaha Midowga Culumada Islaamka oo laga mamnuucay Sacuudiga appeared first on Ilwareed Online.
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya oo gaaray dalka Itoobiya
Howlgal ballaaran oo ka socda magaalada Muqdisho